गजल सन्ध्यामा मोहन
भदौ १४, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी
पोखरा । गजल सन्ध्या, पोखराको अध्यक्षमा मोहन भण्डारी निर्विरोध चयन भएका छन् ।
सन्ध्याको शनिबार सम्पन्न ११ औं अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा वसन्त विनोद, सचिवमा त्रुपक, कोषाध्यक्षमा महेश्वर बस्ताकोटी र सहसचिवमा बालिका अभिलाषी चयन भए । यस्तै सदस्यहरुमा आवाज शर्मा, मैया सुवेदी, अर्जुन दृष्टि पौडेल, विनोद परिवर्तित, कमलबहादुर सुवेदी र सरोज केसी चयन भएका छन् ।
अन्य पदहरुमा निर्विरोध भए पनि सचिवमा निर्वाचन भएको थियो । के. आर. ढकाललाई ४ मतले पछि पार्दै त्रुपक विजयी भएका थिए । ढकालले २३ मत पाए भने त्रुपकले २७ मत पाएका थिए । दीपक समीपको संयोजकत्वमा रुपिन्द्र प्रभावी र लक्ष्मण थापा सदस्य रहेको निर्वाचन समितिले सो घोषणा गरेको हो ।
यसअघि सम्पन्न १५ औं साधारण सभाले अध्यक्ष अमृत सुवेदीद्वारा प्रस्तुत प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तीर्थ श्रेष्ठले पोखराको साहित्यिक क्षेत्रलाई गजल सन्ध्याको गतिविधिले थप उचाइ दिएको बताए । संरचना मिलाउँदैमा कुनै हरफ साहित्यिक मूल्य नराख्ने भन्दै श्रेष्ठले असल साहित्यमा गहन भाव हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही अवसरमा गजल सन्ध्याले सञ्चालन गर्ने गरी स्थापित गजल प्रतिभा सम्मानको अक्षय कोषका संस्थापक ढाका थापालाई सम्मान गरिएको थियोे । शनिबार नै नवनिर्वाचित कार्य समितिले १९४ औं नियमित गजल वाचन सम्पन गरेको छ ।
शनिवार, भदौ १४, २०७६, ०८:०८:००
फाल्गुन १०, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी
फाल्गुन ६, २०७६ रुपिन्द्र प्रभावी
गुरुङ साहित्यिक मञ्चकाे कविता प्रतियोगिता हुने, विजेतालाई दश हजार फाल्गुन १४, २०७६
बागलुङकाे बिहुमा फागुन २२ देखि फागु पूर्णिमा मेला सारङ्गी न्यूज